Usaziwayo wase-Nigeria uDavido umemezela ingoma yakhe ethi-A Better Time | Scrolla Izindaba
Usaziwayo wase-Nigeria uDavido umemezela ingoma yakhe ethi-A Better Time
Kube yisihogo sonyaka – kanti isihlabani se-Afro-pop uDavido uhlaba umxhwele ngealbhamu yakhe entsha ethi-A Better Time.
UDavido wanyuselwa esikhundleni sokuba ngusaziwayo lapho ingoma yakhe ethi-Fem iba yingoma yentsha yase-Nigeria ebhikishela isihluku samaphoyisa nenkohlakalo.
UDavido akazange ahlele i-albhamu entsha, okwamanje, kodwa ngenxa yokwesulwa kohambo lwakhe lomhlaba ngenxa ye-Covid, wenze le albhamu entsha, elindelwe kakhulu – nokuthi ithembisa ukuba mnandi.
Le albhamu iqukethe imithala yezihlabani, okubalwa kuzo namagama amakhulu emhlabeni womculo.
Abaculi baseMelika uNicki Minaj noNas bavezwa e-Holy Ground nakwi-Birthday Cake futhi kukhona nokuvela kwezivakashi okungumculi wakuleli uSho Madjozi.
Abanye abaculi base-Afrika abaningi bakhona ezingomeni kubalwa kuyo uMayorkun wase-Nigeria noMugeez wase-Ghana. Isihlabani somculi waseMelika uLi’l Baby ungomunye wabacula kanye noSo Crazy kanti uChris Brown noYoung Thug basendaweni Shopping Spree.
I-A Better Time iphuma ngemuva konyaka kuthengiswe e-LP ethi-A Good Time.
“Ngibuyele estudiyo, futhi okuhlekisa ngokwanele, bengenza umculo ongcono kunalowo ebengikade ngiwenzile phambilini, futhi silokhu siqhubekile,” kusho uDavido etshela iphephabhuku i-Rolling Stone.
“Ngaphambi kokuthi ngazi ukuthi nginezingoma ezingama-20 estudiyo, zonke zenziwe zaqoshwa zaqedwa. Lapho-ke ngangithi, ‘Ingabe kufanele ngivele ngiyikhiphe nje?”